ओली, दाहाल, नेपाल, खनाल र गौतम सबै हारेका जुवाडे, कोही किन बर्बाद नहोस् ? - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
ओली, दाहाल, नेपाल, खनाल र गौतम सबै हारेका जुवाडे, कोही किन बर्बाद नहोस् ?
२०७७ श्रावण ९, शुक्रबार ०६:१८:००
नेकपाको रत्ताको रडाको यतिखेर मत्थर भएको छ । भित्रभित्रै सबै नेता सबैसँग मुर्मुरिएका छन् । कसैप्रति कसैको विश्वास छैन ।
एउटा नेताको विरुद्धमा आज पाँचजना जमघट हुन्छन् । कसम खान्छन् । पाखुरा सुर्किन्छन् तर रातारात को पहिले गएर साखुल्ले पल्टिने हुन् भन्ने ठेगान हुँदैन ।
यही कारण नेकपाका हरेक नेता रातभर खालमा बसेर बिहान रित्तै उठेका जुवाडेजस्ता भएका छन् । न स्वास्थ्य बाँकी, न धन बाँकी । न परिवारको विश्वास र सम्मान, न आफैसँग ऊर्जा ।
हेरौँ, अहिले कसको हालत के छ ?
केपी शर्मा ओलीः
प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पदबाट हटाउन खोज्नेको पार्टीभित्रको शक्ति, व्यापारिक समुदाय र मिडिया मालिकहरुको सिन्डिकेट लागेकै हो ।
भारतीय चलखेलबारे स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै व्यक्त गरिसके । यतिका बाबजुद उनको तत्कालको सत्ता संकट टरेको छ । दुवै पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने भएको छ ।
तर पनि उनले जित मनाउन सक्ने अवस्था छैन । उनका सबै कमजोरी छताछुल्ल भएका छन् । सबैभन्दा ठूलो कमजोरी, पार्टीभित्रैबाट उनलाई साथ छैन ।
अध्यादेशदेखि अयोध्या प्रकरणसम्मका घटनाक्रम हेर्दा ओलीले फेरि कतै चर्को बोले वा कदम चाले भने उनीविरुद्धको माहोल फेरि तात्नेछ । विषयवस्तुको सौहार्द्रपूर्ण बैठान पार्टीभित्र भएको छैन । त्यसैले के निहुँ पाऊँ र कनिका बुकाऊँ भनेर बसेकाहरु मौका कुरेर बसेका छन् ।
सके ओली स्वयंले, नभए उनको मन्त्रिपरिषदको नालायक टिमले, त्यो पनि नभए सचिवालयका छुद्रभाषीहरुले विरोधीलाई मसला केही दिनमै दिइहाल्नेछन् । विगतले यही भन्छ ।
यिनी हारेका जुवाडेजस्ता आज भएका होइनन् । ओलीमाथि पटकपटक आक्रमण गर्दा पनि बालुवाटार कब्जा गर्न असफल भएपछि तिनै ओलीसँग लोली मिलाउन पुगेका छन् ।
यता विरोधी मोर्चाबाट साथ दिइरहेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमका सामु भने उनले कित्ता परिवर्तन नगरेको प्रस्टीकरण दिइरहेका छन् ।
यति मात्र होइन, वामदेव, नेपाल र खनाललाई ओलीको विरोध झनै चर्काउन उकासिरहेका छन् । तर दाहालले दुइटै नाउमा खुट्टा राखेपछि विरोधी खेमा खल्बलिइसकेको छ ।
ओलीसँग सबैभन्दा बढी घृणाको सम्बन्ध भएका पूर्वएमाले नेताहरुमा नेपाल नै हुन् । त्यसैले कुनै हालतमा ओलीसँग मिल्न र झुक्न नहुने उनको अडान छ ।
ओलीलाई सत्ताच्युत गरेरै छाड्ने उनको अठोट छ । तर, पार्टी विभाजनको दोष लिन उनी तयार छैनन् । त्यसैले प्रचण्डलाई अगाडि सारेर मार हान्न खोजिरहेका छन् ।
तर प्रचण्डले नै खुट्टा कमाइसकेकाले नेपालको अभीष्ट तत्काल पूरा हुने लक्षण देखिँदैन । स्थायी समितिको आउँदो बैठकले आगामी दसैँअगावै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन सके नेपाल र उनको खेमाको ठूलो सफलता मान्नुपर्ने हुन्छ ।
ओलीविरुद्ध प्रस्ट शब्दमा आगो ओकलिरहेका झलनाथ खनाल पनि धर्मराइरहेका छन् । एकातिर प्रचण्डबाट धोका खाएको अनुभूति छँदै छ, अर्कोतिर वामदेव गौतम र ओली खेमाबाट गएका समानान्तर प्रस्तावले खनालको मन भाँडिएको छ ।
ओली खेमाले झलनाथलाई गुुटनिरपेक्ष नेताको पगरी भिराएको छ र आगामी महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक प्रस्ताव गरेको छ ।
शंकर पोखरेल र विष्णु पौडेल उनकै निवासमा गएर ओलीको सन्देशका रुपमा यो प्रस्ताव सुनाइदिएपछि खनाल मुख मिठ्याउन थालिसकेका छन् ।
नेपाल र प्रचण्डको फोन आउँदा मात्र पनि उनलाई झिँजो लाग्न थालिसकेको छ । उता, वामदेव गौतमले हेटौँडा महाधिवेशनको मोर्चा ब्यूँताउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
गौतमले खनाल र आफू एक ठाउँमा उभिँदा नेकपाको सके किङ, नभए किङ मेकर बन्न सकिने विश्लेषण खनाललाई सुनाएका छन् ।
हुन पनि ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालबाट पालैपालो प्रयोग भइसकेका खनालले बरु वामदेवको प्रस्तावले स्वतन्त्र अस्तित्व देखिन सक्ने ठानेका छन् ।
वामदेव पनि के कम, सबै नेताबाट पालैपालो उपयोग भइसकेका खनाललाई एकपटक आफै किन प्रयोग नगर्ने ?
वामदेव गौतम यतिखेर बाहिर प्रचण्ड र माधव नेपालसँग उभिएर ओलीको विरोध गर्ने, भित्रभित्रै ओली र खनालसँग छुट्टाछुट्टै भेटेर बेग्लै रणनीति बुन्ने ध्याउन्नमा छन् ।
ओलीसँग गएर उनको विरासत धान्ने नेता आफू बन्न सक्ने दावी गर्दै छन् । त्यसका निम्ति उनले जनताको बहुदलीय जनवादका नाममा लेख प्रकाशित गरिसकेका छन् ।
अब पुस्तक निकाल्दै छन् । उता झलनाथ खनालकहाँ गएर हेटौँडा महाधिवेशनको मोर्चा ब्यूँताउने भन्दै कान फुकिरहेका छन् ।
प्रचण्ड र नेपाल आफैमा एकअर्काका प्रतिस्पर्धी भएकाले जुनसुकै बेला धोका खान सक्ने भन्दै उनले हरबखत कान ठाडा पारेर राखेका छन् ।
प्रचण्डले खुट्टा कमाउने बित्तिकै उनी ओलीकहाँ पहिला गएर सम्झौता गर्नु पुगिहाल्छन् । गौतम र प्रचण्डको ओली रिझाउने प्रतिस्पर्धाकै कारण विरोधी मोर्चा मक्किएको हो ।
ओलीले महाधिवेशनको कार्ड फालेपछि यसले राम्रैसँग काम गरेको छ । महाधिवेशनको विरोध कसैले गर्न सकेका छैनन् । सबैले महाधिवेशनलाई एकताको सूत्र बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
तर यसभित्रका दाउ आआफ्नै छन् । प्रचण्डले हिजोसम्म बुझेका थिए, नेपालसँगको मोर्चा त्यतिन्जेल मात्र हो, जबसम्म उनले अध्यक्षमा दावी गर्ने छैनन् ।
अब विरोधी खेमाभित्रैबाट वामदेवले पनि अध्यक्षकै दावी गर्न थालेका छन् । अनि एउटै खेमाभित्रबाट तीन अध्यक्षका उम्मेदवार भएपछि महाधिवेशनमा कसको काँधमा चढेर जाने ?
त्यसैले विरोधी मोर्चाका प्रमुख तीन अगुवा एकअर्कालाई धोकेबाज र शत्रुुको नजरले देखिरहेका छन् । उता ओलीले आफू अर्को महाधिवेशनमा नउठ्ने बताइरहेका छन् ।
अनि उनको विरासत बोक्ने प्रतिस्पर्धामा प्रचण्ड र वामदेव किन नउत्रिऊ्न् ? अनि यही पाराले जितिन्छ त ओलीलाई सत्ताच्यूत पार्ने खेल ?